Maleeshiyada Sheekh Mukhtaar Roobow iyo kuwa Al-shabaab oo qarka u saaran inay dagaalaan – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Maleeshiyada Sheekh Mukhtaar Roobow iyo kuwa Al-shabaab oo qarka u saaran inay dagaalaan
Wararka naga soo gaaraya gobolka Bakool ayaa sheegaya in maleeshiyada taabacsan wadaadka caanka ah ee Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ay haatan qarka u saaran yihiin inay dagaal xoog leh la galaan dagaalyahanadda Al-shabaab.
Dagaalyahano aad u badan oo ka tirsan Xarakada Al-shabaab ah ayaa la sheegayaa inay haatan isugu tageen duuleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool, halkaas oo uu ku sugan yahay Sheekh Mukhtaar Roobow, waxaana laga cabsi qabaa dagaal labada dhinac ka dhex qarxo.
Maleeshiyaadka taabacsan Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ayaa la sheegayaa inay haatan dhufeeyso ka dhigteen buuraha deegaanka Abaal oo qiyaastii 18km u jirta magaalada Xudur, si ay isaga difaacaan weerarka kaga soo fool leh ee dagaalyahanadda Al-shabaab.
Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in boqolaal ka tirsan Al-shabaab ah ay haatan isku urursanayaan meel u dhaw xerada kooxda Sheekh Roobow, iyadoo saacad waliba dagaalki qarxi karo, waxayna arrintaan soo baxday, kadib markii Mareykanka uu liiska argagixisada ka saaray Sheekh Mukhtaar Roobow.
Dhinaca kale, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa haatan ku sugan degmada Xudur oo halka la isku hor fadhiyo u jirta 18km, mana cadda inay dagaalka qeyb ka noqon doonaan oo ay la safan doonaan kooxda yar ee Sheekh Mukhtaar Roobow iyo in kale.